Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug oo war ka soo saaray daggaalka Gaalkacyo. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug oo war ka soo saaray daggaalka Gaalkacyo.
Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug oo war ka soo saaray daggaalka Gaalkacyo.
Mudanayaasha Aqalka Sare ee dhawaan laga soo doortay Dowlad-goboleedka Galmudug, waxay ayagoo aad uga xun walaac ka muujinayaan dagaalada soo noqnoqday ee ka soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ee dadka walaalaha ah ee deeganadaas ku wada nool u dhexeeya.
Waxaan aad uga xunnahay dhibaatooyinka dagaaladaas ka dhashay ee isugu jira dhimasho, dhaawac, barakac, but-bur hantiyeed iyo colaad gaamurta oo kala dhex-gasha dadweynaha walaalaha ee ood-wadaagga ah, iyadoo aan aaminsan-nahay in horumarka deegaanadaas ka Jira uusan ahayn mid xamili kara colaad hor leh oo halkaas ka dilaacda.
Mudanayaasha Aqalka Sare, waxay hogaamiyaasha Maamullada Galmudug iyo Puntland ugu baaqayaan in kaalin muuqata ay ka qaataan joojinta dirirtaas, ayagoo u turaya dadka danyarta ah ee Gaalkacyo ku nool, annagoo ku baaqayna in dib loo hawlgaliyo guddiyadii wada-hadalka labada maamul ee la dhisay dabayaaqadii sanadkii hore.
Dhanka kale, Waxaan Waxgaradka, culumaa’udiinka iyo shacabka reer Galkacyood ugu baaqaynaa in Dadaal xooggan lagu bixiyo sidii Dagaalladaas loo joojin lahaa, loona kala qaadi lahaa ciidamada is-horfadhiya, sababna loogu noqon lahaa nabad waarta oo halkaas ka dhalata.
Ugu danbeyn, Waxaan Beesha Caalamka, Dawladda Dhexe iyo Maamulada Puntland iyo Galmudug ugu baaqaynaa in gurmad iyo taakulayn loo fidiyo dadkii Dagaalladaas ku soo barakacay iyo dhaawacyada ka dhashay dagaaladaas.
Mudanayaasha Aqalka Sare ee laga soo doortay Galmudug, Dhiggooda Puntland waxay ku casuumayaan in si wadajir ah looga hawlgalo xal u helida dhibaatooyinkaas iyo nabadeynta dadka walaalaha ah.
Previous articleM/ ku xigeenka Puntland oo booqday dadkii ku dhawacmay weerarkii Gaalkacyo
Next articleBeessha Caalamka oo soo dhowaysay dhismaha Hiir-shabeelle